‘नर्सलाई दसैं बिदा भन्दा पनि बिरामीको खुशी प्यारो लाग्छ’
अमृता विश्वकर्मा, नर्स, भक्तपुर अस्पताल
अमृता विश्वकर्मा भक्तपुर अस्पतालकी नर्स हुन् । १६ वर्ष लामो सेवा अवधिमा उनले ३, ४ वटा दसैंमा मात्र बिदा बसेकी छन् । उनलाई दसैंमा बिदा बस्न, परिवारसँग रमाउन मन नभएको कहाँ हो र ? उनले अँगालेको पेसा नै त्यस्तै छ । जहाँ चाडपर्व, रितीरिवाजभन्दा माथि बिरामी हुन्छन् । उनीहरुको सेवामा रातदिन खटिँदा कतिपय महत्वपूर्ण चाडपर्व तिनै बिरामीको सामिप्यमा बिताउन बाध्य हुन्छन् । तैपनि अमृताको कुनै गुनासो छैन । ‘हाम्रो पेसा नै यस्तो हो,’ उनी भन्छिन्, ‘सुरुसुरुमा दसैंमा बिदा नमिल्दा दुःख लाग्थ्यो । तर, अहिले बानी परिसक्यो । दसैंको रमाइलो भन्दा बिरामीको खुशी भएको देख्दा गर्व लाग्छ ।’
अहिले उनी जुनियरलाई दसैंमा घर पठाएर आफू ड्युटी गर्न आउँछिन् । किनकी सुरुसुरुमा आफूले दसैंमा बिदा नपाउँदा भोगेको पीडा सम्झिन्छिन् । तर, मान्छेको मनै हो । सबैकुरा त्याग गरेपनि आफूले रमाउँदै, मनाउँदै आएको परम्परालाई त कहाँ भुल्न सक्छन् र ? त्यसैले अमृतालाई पनि दशैंको टिकाको दिन सबैजना रातो टिका पहेंलो जमरा लगाएर हिँडेको, सामाजिक सञ्जाल तस्बिर पोष्ट देखेपछि कता कता मन खिन्न हुन्छ । ‘कहिले त ड्युटीले गर्दा टिका लगाउनै पाउँदिन,’ उनी भन्छिन्, ‘घरमा टिकाटालो गरेको सम्झँन्छु, फूर्सद भए भिडियो कल गरेर चित्त बुझाउँछु ।
अहिले उनी जुनियरलाई दसैंमा घर पठाएर आफू ड्युटी गर्न आउँछिन् । किनकी सुरुसुरुमा आफूले दसैंमा बिदा नपाउँदा भोगेको पीडा सम्झिन्छिन् । तर, मान्छेको मनै हो । सबैकुरा त्याग गरेपनि आफूले रमाउँदै, मनाउँदै आएको परम्परालाई त कहाँ भुल्न सक्छन् र ? त्यसैले अमृतालाई पनि दशैंको टिकाको दिन सबैजना रातो टिका पहेंलो जमरा लगाएर हिँडेको, सामाजिक सञ्जाल तस्बिर पोष्ट देखेपछि कता कता मन खिन्न हुन्छ । ‘कहिले त ड्युटीले गर्दा टिका लगाउनै पाउँदिन,’ उनी भन्छिन्, ‘घरमा टिकाटालो गरेको सम्झँन्छु, फूर्सद भए भिडियो कल गरेर चित्त बुझाउँछु ।’
उनले अहिलेसम्म पाँच जिल्लामा स्वास्थ्य सेवा गरेको अनुभव हासिल गरिसकेकी छिन् । तर, १६ वर्षको यो अवधिमा आफूले सोचे जस्तो गरि दसैं मनाउन नपाएको उनी सुनाउँछिन् । ‘दसैंको दिन होस् वा अन्य कुनै पर्व घरको सम्झना आउँछ,’ उनी भन्छिन्, ‘कहिले त भक्कानिन्छु तर, सम्हालिनु बाहेक विकल्प छैन ।’